Kismaayo News » Aw Jaamac , Korxaadiska sooyaalka halyey galbaday
Kn: Aw Jaamac Cumar Ciise waxa uu ahaa halyey Soomaaliyeed oo noloshiisa u sadqeeyey xorriyadda ummadda Soomaaliyeed maanta harsato oo ka dhalatay halgankii Daraawiishtii Soomaaliyeed la gashay gumaysigii dalka iyo dadka ku soo duulay. Waxa uu uruuriyay gabayadii ama raadraacii uu ka unkamay qaran Soomaaliyeedkeenaan dunida maanta ka saxiixan. Waxa uu ahaa qoraa, bare, abwaan, halgamaa iyo awoowe Soomaaliyeed ay tahay in dhallaanka loo dhigo qaabkii uu waddannimo ahaan ugu hagarbaxay dalkiisa iyo dadkiisa, qaabkii uu u maamuusay waayihii adkaa ee dalku soo maray, iyo qaabkii uu ugu loollamay sarraysiinta magaca ummadda Soomaaliyeed asaga oo si ku-dayasho leh u tusaaleeyay qaninnimada Soomaalinnimadu leedahay. Miisaan culus ayuu ku reebay cilmi baaristii afka Soomaaliyeed. Waxa uu lahaa shaqsiyad aad iyo aad u wanaagsan.